ငါကြည့်ရှုလေလေ၊ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, သြဂုတ်လ 14, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များသည်လက်ရှိအလုပ်မှကျွန်ုပ်တို့ကိုအာရုံလွဲသွားစေသလားတစ်ခါတလေတွေးမိသည်။ မင်းကမင်းကိုပိုပြီးမျှော်လင့်နေတယ်ဆိုရင်မင်းဘယ်မှာနေနေရသလဲ။ တစ်ခါတစ်ရံအိမ်တွင်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်ခွင်၌ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရမည့်အရာအားလုံးကိုတွက်ချက်ရန်ခက်ခဲသောအရာတစ်ခုလိုအပ်သည်။
ဤသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က, ငါ့ဘလော့ဂ်ပြန်ပြုပြင်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါအလုပ်သစ်တစ်ခုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လျှောက်လွှာတစ်ခုကိုတီထွင်ရန်ညတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ငါဟာမုန်းတီးမှုသိပ်မရှိလှဘူး။ ပန်းတိုင်တခုခုကိုအာရုံစိုက်ပြီးအဲဒါကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ငါကြိုးစားရတာကိုနှစ်သက်တယ်။ ရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်သစ်ကိုယခုအာရုံစိုက်ရန်မှာအလွန်ပြင်းထန်သည်။ အလုပ်မှထွက်ပြီးကျွန်ုပ်ကားထဲတွင်ခုန်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်စီမံကိန်း၏အာရုံကိုအာရုံစိုက်မိသည်။ နံနက်ခင်းရောက်တော့ငါ့အလုပ်ကိုပြန်စဉ်းစားမိတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းကျွန်ုပ်ဘလော့ဂ်ပျောက်ဆုံးသွားသည်။ ငါနေ့စဉ်ဖတ်ဖတ်ဆက်လက်သော်လည်းငါ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်များနှင့်အတူအကောင်းဆုံးရံဖန်ရံခါဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မယုံဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါသေချာသင့်သလောက်တော့အာရုံစိုက်မထားဘူး။ ငါအများဆုံးလျစ်လျူရှုခဲ့သောtheရိယာသည်ကျွန်ုပ်ကိုစောင့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည် ကြော်ငြာအခွန်ဝန်ကြီးဌာန, analytics နှင့်အဆင့်။ ငါလုပ်ရမယ့်အလုပ်ရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးဆုံးရှုံးမှုကိုစိတ်မပူပါနဲ့အဲဒါကိုလျစ်လျူရှုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ငါ၏အရာထူးနှင့်အသွားအလာကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အလေ့အထအတော်လေးစွဲဖြစ်လာခဲ့သည်! ငါဒါကိုတစ်ကြိမ်ထက်မကစစ်ဆေးမယ်လို့မယုံဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဂဏန်းတွေနောက်ကျတာကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါကနာရီပေါင်းများစွာတွေးနေပြီးအဲဒါကိုတွန်းလှန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်လှိုင်းကိုတွန်းလှန်ခြင်းနှင့်တူသည် - စာဖတ်ပရိသတ်အကြောင်းဖြစ်သည် အရှိန်အဟုန်တုံ့ပြန်မှုမဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာမာရသွန်ပြေးပွဲမဟုတ်ဘဲမာရသွန်ပြေးခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်။
အကယ်၍ သင်၏စာရင်းဇယားသည်သင်လိုချင်သောလမ်းကြောင်းသို့မသွားလျှင်၊ သံလိုက်အိမ်မြှောင်မှခွာထွက်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ငါအခုကောင်းကောင်းပြန်ထွက်လာပြီလို့ရိုးရိုးသားသားပြောနိုင်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့စာဖတ်သူတွေတိုးတက်လာပြီ၊ ကျွန်မရဲ့ feed stats တွေတက်လာတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ဝင်ငွေတွေလည်းတက်လာပြီ။ ငါအကောင်းဆုံးလုပ်တာကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါကတာရှည်ခံတဲ့အရာတွေအတွက်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုမကြည့်တော့တာဘဲ။ ငါပြန်လာလိမ့်မယ် Blog တင်ရန် အဖြစ်မကြာမီငါ၏အစီမံကိန်းကိုပြီးစီးအဖြစ်! စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့စာဖတ်သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
John Chow dot Com မှဒေါ်လာသန်းချီသောဝီကီပြိုင်ပွဲ
Fav.or.it Preview စတင်ခြင်း
သြဂုတ် 15, 2007 မှာ 1: 37 AM
ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးပါ 🙂 ရာသီအစကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက် တတ်နိုင်သမျှ Adsense ချန်နယ်တွေရဲ့ ကိန်းဂဏာန်းတွေကို မကြာခဏ စစ်ကြည့်နေပါတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဒါက ​ပေးဆပ်​ခဲ့တာ​ကြောင့်​ မကြာခင်​ ငါနည်းနည်း​နှေး​တော့မယ်​🙂
သြဂုတ် 15, 2007 မှာ 2: 29 AM
ကျွန်တော်သဘောတူသည်။ ကိန်းဂဏာန်းတွေကို စွဲလမ်းဖို့ အတော်လေး လွယ်ကူနိုင်ပါတယ်။ ငါ့ရဲ့ ကိန်းဂဏာန်းတွေကို တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်လောက် ကြည့်နေရတုန်းပဲလို့ ငါထင်တာ အရမ်းများတယ်။
အကြောင်းအရာကောင်းများကို ရေးသားပြီး သင့်ဘလော့ဂ်ကို စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန်သာ အာရုံစိုက်ပြီး အသွားအလာများလာပါမည်။
သြဂုတ် 15, 2007 မှာ 8: 12 AM
ငါလုံးဝဆက်စပ်နိုင်သည်! အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ကုမ္ပဏီဘလော့ဂ်ကို နေရာရွှေ့ပြီး အစကနေ ပြန်စခဲ့တာမို့၊ အခုချိန်ထိ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ ကိန်းဂဏာန်းတွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲ စွဲလမ်းနေခဲ့တာ ဘယ်လောက်တောင် ရယ်စရာကောင်းလိုက်လဲ။ အများကြီး ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပါ။
မင်းကံကောင်းပါစေ၊ မင်းအရာတွေကို လွှဲဝင်ပြီးတာနဲ့ ပို့စ်တင်ဖို့ အချိန်ပိုရမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
ဟင်နရီ @ B2B အရောင်းဘလော့
သြဂုတ် 21, 2007 မှာ 8: 33 AM
အထက်ပါအချက်များနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဘလော့ဂါတစ်ဦး (နှင့် အရောင်း/စျေးကွက်ရှာဖွေသူ) အဖြစ် ဘဝ၏ မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်မည်ဟု ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါတွင် ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ site ၏ ကိန်းဂဏာန်းများကို မကြာခဏ စစ်ဆေးနေပါသည်။ မူရင်းအကြောင်းအရာကို ဖော်ထုတ်ဖို့ အာရုံစိုက်ပြီး နောက်ကွယ်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ကန်ထုတ်ရပါမယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်းသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဒါကိုသိပါတယ်- သင့်ဖောက်သည်တွေရှေ့မှာ အပေးအယူတွေပိတ်ပြီး ကော်မရှင်စစ်ဆေးမှုအတွက် စိတ်ပူရမယ့်အစား ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှု၊ စာရင်းဇယားတွေ စတာတွေမှာ အချိန်ဖြုန်းဖို့ သဘောထားပါ။ ဘလော့ဂါတစ်ဦးအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ စာရင်းသွင်းသူများကို ထင်ရှားကျော်ကြားသော အကြောင်းအရာများကို အာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ စာရင်းသွင်းသူများကို မြှင့်တင်ရန် အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျန်​တာ​တွေ​ပြော​ကြ​လိမ့်​မယ်။